Kismaayo News » Sheekh Gacameey, Gacan ka gardaran ayaa dishey
Sheekh Gacameey, Gacan ka gardaran ayaa dishey
Kn: Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Gacameey, mid ka mid ah culumada Soomaaliyeed ee sida weyn loo qadariyo, ayaa dil toogasho ah lagu fuliyey magaalada Garoowe ee Puntland xili uu ku jiray salaadda casar.
Gacan ka gardaran ayaa dishey, dilkiisa waxaa si weyn oga argagaxay Soomaalida oo dhan, waxayse tani hoos kasii xariiqeysaa halista weyn ee dalka soo foodsaartay.
Iyada oo kooxda Alshabaab ay dagaalo ka bilaabeen gobolada Waqooyi Bari dalka, ayaa Sheekha waxa uu ka mid ahaa culumada sida weyn u dhaliishan mabaadii’da Alshabaab ee fadqalada ah.
Sheekha waxaa toogtay wiil da’yar oo ku garab tukanaayay, wuxuuna dhagar qabuhu xabadda ku dhuftay asagoo Sheekhu sujuudsan. Dadweynaha masaajidka ku tukanaayay ayaa ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan gacan ku dhiiglaha oo isku dayay inuu goobta ka baxsado inta dadka salaadda ku jiraan.
Waa Sheekhii labaad oo kamid ah culimada ugu caansan Soomaaliya kaasi oo lagu dilo deegaanada Puntland. Xarakada Alshabaab ayaa dil ku xukuntay culimo badan oo Allaha u naxariistee marxuum Sh. Cabdulqadir kamid yahay.
Culimada kale ee Alshabaab ay dilka u qoreen waxaa kamid ah Sh. Umal, Sh. Shibili, Sh. Maxamed Idriis, Sh. Axmed Cabdi Samad, Sh. Nuur Baaruud, Sh. Bashiir Salaad, Sh. Ibraahim Dheere iyo culumo kale, ilaa iyo haddana waxay ku guulaysteen inay god aakhiro u diraan Rabbi naxariistii jano haka waraabiyee, Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyo Dr. Cabdiqaadir Nuur Faarax oo loo tiirinaayo inay ayagu ka danbeeyeen, walow ay wali socdaan baaritaano iyo qudaadar lagu haayo gacan ku dhiiglihii falka gaystay.
Waa qorshe halis ah oo lagu cirib tiraayo Allaha xifdiyee culimada diinta, waxaana suuro gal ah inay jiraan gacmo kale oo ku lamaan.
Shaqaalaha iyo maamulka KismaayoNews, waxay tacsi u dirayaan ehelada iyo qaraabada uu kabaxay Allaha u naxariistee Dr. Cabdiqaadir.